मधुपर्क २०६६ बैशाख – मझेरी डट कम
by poudel prakash
तिम्रो ब्रेकफास्ट तयार छ र लन्च पनि । म र्फकन अलि ढिला हुन्छ होला । सिन्तिया आफूलाई बाहिर निस्कनको लागि तयार पार्दै बोल्छे । ठूलो ऐना अघिल्तिर छ ऊ, भर्खर लुगा फेरेर मेकअपतिर लागेकी छ । ओठमा लिपिस्टिकको धर्का कोर्दैछ । ब्रेन्डा बेडमा नै छ । ओड्नेभित्र शरीर छ । अनुहार मात्र निकालेर सिन्तियालाई अघिदेखि हेरिरहिछ ।
‘भाते’ भन्नेलाई ‘ज्यू’
तिनताक म एयरपोर्टमा जागिर खान्थेँ । जागिर पनि के भन्नु र! महिनाभरि काम गरेपछि हजार पन्ध्र सय पाइन्थ्यो होला, दिनभरि त्यतै जान्थेँ । पद भने मेरो ठूलै थियो- सुपरभाइजर । एउटा ट्राभल्स व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको कर्मचारी प्रतिनिधिका रूपमा म त्यहाँ थिएँ । त्यो संस्थाले एयरपोर्टमा पोर्टर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । जहाजबाट यात्रा गर्ने यात्रीहरू बाहिर जाँदा र बाहिरबाट आउँदा तिनको सामान पोर्टबाट भित्र पुर्‍याउने र बाहिर निकाल्ने कामका लागि करिब सय जना मान्छे खटिएका थिए । ती सय जना मान्छे पनि मैले काम गर्ने संस्थाकै जागिरे थिए ।
अज्ञात ऋषि राई
माया मर्दैन ।
प्रेमी एउटा हुन्छ साथी, हजार नबनाउनु
आफैँले आफैँलाई, बजार नबनाउनु ।
तल भेरीमा झलल बिजुली बलेको छ
माथि खलङ्गा अन्धकारमा जलेको छ ।
सुशीला खड्का 'हसिना'
उज्यालोमा खोज्यौ होला अँधेरीमा थिएँ
वसन्तमा रम्यौ तिमी खडेरीमा थिएँ ।
तारा हौ तिमी
तिमी जून हौ मेरी, तारा हौ तिमी
मेरो सबथोक संसार सारा हौ तिमी ।
प्रभुराज थापा 'विवश'
नयाँ युगको रथ हाक्न नयाँ बन्नुपर्छ
गरिब-दुःखी निमुखाको दया बन्नुपर्छ ।
सर्वोच्च हुन् जनता नै अभिमत ठूलो
कहिले सुन बनाउँछन् कहिले भुइँको धूलो
अस्तिको भूकम्पले टोकियोलाई सामान्य झट्का दिए तापनि मेरो त मुटु नै हल्लाएको थियो तर त्यसले मानवीय वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति भने पुर्‍याएन । त्यसो भनेर दङ्ग पर्नु पनि एउटा ठूलै गल्ती जस्तो हुन्छ किनभने टोकियोमा भूकम्प आउने सम्भावना त एकैछिन कुरा गर्दागर्दै पनि भई नै रहन्छ । म टोकियोको एउटा चारतारे होटलमा कुनै बखत मसँग एउटै विश्वविद्यालयमा पढाउने मेरो एक पुरानो साथी भिन्सेन्टसँग बसेर खानपिन गर्दै थिएँ ।
आजकल कुनै कार्यक्रम सुरु हुनुअघि, ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली एकएक मिनेट मौनधारण गरेर मात्र थालिने गरिएको छ । मैले थाप्लोमा हात राखेर यसो सोचेँ । माथ्लो दाँतले तल्लो ओठ टोकेँ, ९०’ डिग्री निहुरिएर सालिकलाई ढोगें । यो सहिद भनेको के हो ? आफ्ले-आफैँलाई मनमनै प्रश्न गरेँ । वर्षैंपिच्छे सहिद सप्ताह मनाएर सहिदको गुणगान गाएको, कान टट्याउने गरी सुन्दै आएको आधा शताब्दी व्यतित भइसक्दा पनि शब्दको अर्थ बुझिन भन्नु त लाजै मर्नु भइहाल्छ नि, भन्ने लाग्यो । एक मनले त, जेसुकै होस् ! मान्छेले गोली खाएर त मरे भने, म लाजले मर्नु परे के भो र … आरामले मरिदिउँला भन्ने जस्तो पनि लाग्यो । हुन त अहिले ‘शहिद’ शब्द पनि सहिद भएको छ ।
तिम्रो सुन्दर मुहारको
हरपल तिम्रो याद बोकेर
आफैँसँग चोरेर जिन्दगीको एउटा पाटो
उन्मुक्त भएर बाँच्ने मन थियो
रहरहरूका अनन्त आकाशमाथि
निरुद्देश्य हराउने मन थियो
जुनेलीको उज्यालोमा आफैँसँग
जुनीजुनीको दुःख बिसाउनु थियो ।
उनी झरेर आउँछिन् ममा
सुटुक्क रातमा उनी झरेर आउँछिन् ममा
र, नीँद रातमा त्यसै हरेर आउँछिन् ममा ।
छ ज्योति पूर्णचन्द्रको र मोहनी छ चालमा
र, लाडिँदै र मस्किँदै सरेर आउँछिन् ममा ।
म बदलिएकी छु
मैले देखेँ कुइरोले आत्माहत्या गर्दै
तल झरेर पानी बनेको
पानीले आत्महत्या गर्दै
आकाशिएर कुइरो बनेको
आहा … ! कति आनन्ददायी
रूपान्तरण प्रकृतिसँग प्रकृतिको
भुइँमा राख्दा बिगि्रन्छ भनेर
दलिनमा राखिन्छ पाकेको फर्सी
हेर्दा राम्रो-चाम्रो हुन्छ,
छाम्दा गिलित्तै राखेको फर्सी ।
तिमीसँगको एउटै भेट!
पलपल सम्झन बाध्य छु
तिमी चट्याङ बनी बर्सेको क्षण
म सोच्न विवश छु ।
त्यो पानी परेको रात-बिजुली चम्केको रात
जिन्दगीसँग जिन्दगी-साटिएको रात